Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. राजनीतिसँगै व्यवसायमा कुशल कुमार – Janata Live
‘राजनीतिक कुसंस्कार सुधार गर्नु जरुरी छ ।’
राजनीति नितान्त समाज सेवा हो, यसलाई व्यापारका रूपमा लिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्, दोलखाका कुमार अधिकारी । सामाजिक काम गर्न रुचाउने उनी विशेष गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहभागी हुँदै आएका छन् । राजनीति, समाज सेवा र व्यवसायलाई एक–अर्काका परिपूरक ठान्ने अधिकारी पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा कुसंस्कार फैँलिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई समाज सेवाका रूपमा लिनुपर्नेमा व्यापार भयो ।’ यसप्रति उनी निकै चिन्तित छन् । भन्छन्, ‘राजनीतिमा कुसंस्कार भित्रियो यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।’
जीवनमा विभिन्न संघर्षहरू पार गर्दै उनी अहिले समाजसेवी तथा एक सफल व्यवसायी बन्न पुगेका छन् । युवा अवस्थामा नै सफल व्यवसायी बन्न पुगेका उनी युवापुस्ताका लागि एउटा उदाहरणीय व्यक्ति त बनेकै छन्, साथै राजनीति गर्नेहरूका लागि पनि प्रेरणाका स्रोत बन्न सफल भएका छन् ।
दोलखा जिल्लाको फुसाफेद गाविस वडा नंं. ५ मा बुबा कृष्णबहादुर अधिकारी र आमा चन्द्रकुमारी अधिकारीको साइँलो छोराका रूपमा उनको जन्म भएको हो । उनका बुबा सरकारी जागिरे भएका कारण उनले बाल्यकालमा खासै दुःख गर्नु परेन । उनका हजुरबुबा पनि जागिरे त्यसमाथि एक्लो बाउको छोरा भएका कारण उनको बाल्यकाल सुखद नै रहेको थियो ।
तर, उनको बाल्यकालको अध्ययन भने स्थिर थिएन । कहिले कुन विद्यालय कहिले कुन । परिवर्तन भइरह्यो । प्रावि तहको अध्ययन भने उनले ताप्केडाँडा प्राविमा गरेका थिए । त्यसपछि मागापौवा गाविसमा रहेको दुर्गा माविमा अध्ययन सुरु गरे । विद्यालय घरबाट अलि टाढा थियो । गाउँको ठाउँ यातायातको सुविधा हुने कुरै भएन । करिब २ घण्टाको बाटो हिँडेर उनी विद्यालय जाने आउने गर्थे । विद्यालय जाँदा सुरुका दिनहरू उनका लागि निकै पीडादायी बन्यो । हुन पनि २ घण्टासम्म लगातार हिँड्नुपर्दा थकाइ लाग्थ्यो, शिक्षकले पढाएको बिर्सिनु पनि स्वाभाविकै हुन्थ्यो । एकातिर टाढाको बाटो पैताला सुन्निन्थे अनि फर्कन्थे पनि । आउँदा पनि समस्या त्यही नैे । निकै कष्टका साथ उनले अध्ययनलाई निरन्तर दिइरहे । फलस्वरूप २०५२ सालमा उनले एसएलसी परीक्षा दिए । र, उत्तीर्ण पनि भए ।
काठमाडौंको बसाइ र साथीको संगत
एसएलसी पास भएपछि उच्च शिक्षाको अध्ययनमा उनी काठमाडौं आए । अनि ललितपुरको पाटन क्याम्पसमा भर्ना भए । अध्ययनका क्रममा साथीहरूसँग भेटघाट सुरु भयो । धेरै साथी धनी बाउका छोराहरू भएका कारण क्याम्पस अध्ययन गर्दै गर्दा आफू खर्चालु बन्दै गएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘साथीको संगतले म खर्चालु बने मलाई पैसाको आवश्यक थियो ।’ तर पैसाको आवश्यक प¥यो भन्दैमा कहिल्यै पनि आपूm नराम्रो काममा नलागेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई पैसाको अभाव भएपछि ममा पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो र पढ्दै काम गर्दै गर्न थाले । सुरुमा मैले टे«किङ गाइड हेल्परका रूपमा काम पाएको थिए ।’
ट्रेकिङको पहिलो अनुभव
सरकारी विद्यालयमा पढेका कारण अंग्रेजी भाषामा कुमार कमजोर थिए । पर्यटन क्षेत्रमा अंग्रेजी भाषा जान्नेका लागि राम्रै अवसरहरू प्राप्त हुने गर्थे । तर, अंग्रेजीमा कमजोर भएका कारण कुमारलाई पहिलो पटक ट्रेकिङ जाँदा निकै असहज भयो । जसका कारण दोस्रो पटक ट्रेकिङ जानका लागि उनले निकै तयारीका साथ जानुपरेको थियो । पहिलो पटक भाषामा असहज भएपछि उनले अंग्रेजी भाषाको कक्षा लिए । ट्रेकिङसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर उनले यस पेसालाई निरन्तरता दिँदै गए । गाइड हेल्परका रूपमा काम सुरु गरेका कुमारले पछि गाइडका रूपमा काम गर्दै गए । कामप्रतिको मिहिनेत र झुकावका कारण उनी अनुभवी पनि भए ।
यस क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा उनले आफ्नै कम्पनी खोल्न खोले । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा एजभेन्जर कन्टिनेक्सन नामकोे कम्पनी खोलेर उनी पर्यटन व्यवसायीका रूपमा देखापरे । त्यस बेला उनले अर्का एक साथीसँग मिलेर कम्पनीको स्थापना गरेका थिए ।
सामाजिक क्षेत्रमा कुमार
राजनीतिलाई समाजसेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्ने कुमारले सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै योगदान पु¥याएका छन् । उनले विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । उनले वर्षमा ३/४ पटकसम्म सर्जिकल आई क्याम्प सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रका वृद्धवृद्धा विशेषगरेर लाभान्वित बन्न पुगेका छन् । गाउँमा नै उनले आँखा शिविर सञ्चालन गरी सेवा दिँदै आएका छन् । आफ्नै स्थानमा आँखा परीक्षण गराउन पाउँदा सेवाग्राहीले उनको कामको तारिफ गरिरहेको पाइन्छ । उनले यो काम सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप लागायतका गाउँबस्तीहरूमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
सामाजिक काममा अब्बल मानिएका कुमार अधिकारीले गत वर्ष गएको शक्तिशाली भूकम्पका बेला नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको सहकार्यमा दोलखाको साङवा भन्ने ठाउँमा हेल्थ क्याम्प सञ्चालन गरेर त्यहाँका भूकम्पपीडितका लागि सेवा गरेका थिए । त्यसका साथै उनले मोडर्न एजुकेसन प्रोजेक्ट अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका विद्यालयमा खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएका छन् ।
आफ्नो सानो प्रयासबाट कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्छ भने किन नगर्ने त भनेर आपूmले शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको कुमार बताउँछन् । विशेष गरेर उनले सिन्धुली, काभ्रे र दोलखामा रहेका विद्यालयहरूमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिरहेका छन् ।
कुमारले स्थानीयस्तरमा महिलामा हुने विभिन्न रोगहरूका लागि गाउँमा नै क्याम्प सञ्चालन गरेर त्यसको उपचारमा पनि सहयोग पु¥याइरहेका छन् । विशेष गरेर महिलामा देखिने आङ खस्ने रोगबाट पीडित महिलाहरू खुलेर भन्न नसक्ने भएका कारण रोग पालेर बस्ने अवस्थालाई यसले सहजीकरण गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न स्थानमा उनले रक्तदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
सानैदेखि नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने गर्थे कुमार । उनी निमावि तहको अध्ययन गर्ने समयमा देशमा पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाबीचको आन्दोलन भएको थियो । त्यही आन्दोलनमा सहाभागी हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको उनी सुनाउँछन् । तर त्यति बेला अहिलेको जस्तो राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन । उनलाई त्यो विषयमा चित्त बुझ्दैनथ्यो । स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेर फरक विचार राख्ने गर्थे । त्यस बेला कम्युनिस्टहरूको भाषणले गर्दा उनलाई सोच्न बाध्य बनायो । उनी भन्छन्, ‘त्यस बेला कम्युनिस्टहरू भाषण गर्दा भन्ने गर्थे— डाँडामा मोटर कुदाउँछौं अनि बिजुली बाल्छौं तर बस्ती भएको ठाउँमा विजुली नबालेर डाँडामा किन बिजुली बाल्ने, बस्तीमा मोटर नकुदाएर किन डाँडामा मोटर कुदाउनु ? त्यसको औचित्य नहुने मेरो सोचाइ हुन्थ्यो ।’
यसरी फरक विचार राख्दै आएका अधिकारी २०४९ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ इकाई सभापति बन्न सफल भए । प्रजातान्त्रिक विचारसँगै सक्रिय राजनीतिमा पनि होमिए, जसअनुसार नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेका विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रममा उनको सहभागिता बढ्यो । २०५४ सालमा उनले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिए । पूर्णकालीन रूपमा कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय बनेका कुमार २०५७ देखि ५८ सम्म नेपाल तरुण दलको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रहेर राजनीतिक अनुभवलाई तिखारेर लैजाने मौका पाएको बताउँछन् । त्यसैगरी २०६२ देखि २०७२ सम्म नेपाल तरुण दलको जिल्ला उपाध्यक्षका रूपमा क्रियाशील रहे । नेपाली कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार बने पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानीका कारण त्यसमा उनी सफल भने भएनन् ।
तर हिम्मत हारेनन् । पछि केन्द्रले बनाएको पर्यटन विभागमा किशोरसिंह राठौरको सहयोगीको रूपमा काम गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीसँग जोडिन पुगेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । उनले नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्षका रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाए । उपाध्यक्षमा रहेर काम गर्दागर्दै अहिले उनी अध्यक्ष बनेका छन् ।
ट्रेकिङ गाइड हेल्परका रूपमा काम सुरु गरेका कुमारले केही समयको अनुभवपछि साथीसँग मिलेर एउटा कम्पनी खोले । पहिले अर्काकोमा जागिर गर्ने कुमारले अब अरूलाई रोजगारी दिन थाले । उनले उक्त कम्पनी मार्पmत ५ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । सिजनका बेला ७० देखि ८० जनासम्मलाई रोजगारी दिएका छन् । अहिले उनी कम्पनीका मालिक बनेका छन् । उनले २०६७ सालमा दोलखाको जिरीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सैलुङ भिलेज रिसोर्ट खोलेर ग्रामीण पर्यटनको विकासमा सहयोग पु¥याएका छन् । उनी दोलखामा पहिलो पटक सुविधासम्पन्न होटल खोलेर त्यस भेकका लागि नमुना नै बनेका थिए । अहिले उनको सिको धेरैले गरेका छन् । तर गत वर्षको भूकम्पका कारण उक्त होटल ध्वस्त भयो ।
त्यसपछि हाल उनले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा सुविधासम्पन्न सम्पदा होटल रिसोर्ट खोलेका छन् । पाँच जनाको लगानीमा उनले काठमाडौंको केन्द्र मानिने लाजिम्पाटमा होटल खोलेर पुनः व्यावसायिक यात्रालाई निरन्तरता दिएका छन् । यो होटल खोल्नका लागि १९ महिनासम्म गृहकार्य नै गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
सम्पदा होटल एन्ड गार्डेनबाट नयाँ व्यवसाय
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई मध्यनजर गर्दै सम्पदा होटल एन्ड गार्डेन होटल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उनले सञ्चालनमा ल्याएको यो होटल पाँच रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । शान्त वातावरण अनि हरियाली, बिहानको सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म घाम लाग्ने र पर्याप्त पार्किङको सुविधा यहाँ उपलब्ध छ । त्यसका साथै २ सय जनाका लागि सेमिनार एउटा हल र ७० जना अट्ने २ वटा सेमिनार हल, २५० जनासम्म एकै पटक बसेर खान मिल्ने गार्डेन रेस्टुरेन्ट, इली ब्रान्डको कफी, ओपन गार्डेन, २० वटा डिलक्स रुममा ४७ वटा बेड, अनुभवी कुकले बनाएको इन्डियन, चाइनिज, नेपाली, इटालियन, कन्टिनेन्टल मल्टी किचेनको स्वाद होटलमा उपलब्ध हुने उनी बताउँछन् । नरेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा २५ जना अनुभवी स्टाफहरू यहाँ कार्यरत छन् ।
आगामी दिनमा मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हेल्थ क्लब र स्पा सेवा पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनी जानकारी दिन्छन् । साथै अन्य स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने योजनासमेत रहेको सुनाउँछन् । कुनै पनि व्यवसायमा निरन्तर स्वस्थ हिसाबले लागेको खण्डमा सफल व्यवसायी बन्न सकिने उनी बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा.राजेश साम्भाजीराव पाण्डवले उपचार मात्रैले संक्रमण नियन्त्रण नहुने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुको...